May Nyane: November 2007
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့ဟာ ‘အမျိုးသမီးများကို အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး နိုင်ငံတကာ အထိမ်းအမှတ်နေ့’ (International Day for Elimination of Violence against Women) ပါ။ ပြီးတော့ (၂၈၊၁၁၊၀၇-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)ရဲ့ ဘီဘီစီ ရေဒီယို မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်က ‘ကမ္ဘာ့အရေး မြန်မာ့အရေး’ ဆွေးနွေးခန်းကလည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုထဲက အမျိုးသမီးတွေ ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆွေးနွေးကြတဲ့အထဲမှာ ကျမ ၀င် ဆွေးနွေးခဲ့ရ ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တခြား ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးကြတဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေက ပြည့်စုံလွန်းလို့ တကယ်တမ်း ကျမ ပြောချင်တာတွေ အများကြီး ပါသွားတာနဲ့ ကြုံရပါတယ်။
နောက်တချက်ကတော့ တကယ့် ခေါင်းစဉ်ကြီးတခုကို အချိန်တို မိနစ်ပိုင်းကလေး အတွင်း ပြောရတာကြောင့် အပြည့်အစုံ မပြောနိုင်တဲ့၊ သိုင်းဝိုင်း ပြောပြခွင့်မရတဲ့အတွက် ပြောစရာတွေ ကျန် သွားတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဖြေတခုတော့ ထွက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ နိုင်ငံ့အရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပါဝင်မှု အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါတယ်ဆိုတာ ကို လူ့ပတ်ဝန်းကျင်က အများကြီး သတိပြု လာကြ ရပြီ ဆိုတာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိစ္စကို တကူးတက ထည့်ပြောလာရတာ ကလည်း အကြောင်းရင်းတွေ ရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်မျိုးနှစ်စားတည်း ရှိတာတောင်မှ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေကို ဦးဆောင်သူအနေနဲ့ လက်သင့်မခံချင် လို့၊ နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်တဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ရှိလာလို့၊ အမျိုးသမီးတွေဘက်က အခွင့်အရေးတွေ တောင်းဆိုလာကြရတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာလည်း အခွင့်အရေး(Opportunity) နဲ့ အခွင့်အလမ်း(Chance) ဆိုတာ ရှိလာပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရတဲ့ အခွင့်အလမ်း တွေ ပွင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်တဆင့် အခွင့်အရေးတွေ အပြည့်အ၀ရလာဖို့.. ယူနိုင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာက ဓလေ့ထုံးစံ အစဉ်အလာ အစွဲအလန်းတွေအရ ‘သားကို သခင် လင်ကို ဘုရား’၊ ‘ကြက်မ-တွန်လို့ မိုးမလင်း’၊ ‘မိန်းမ-ဖျက် ပြည်ပျက်’၊ ‘မ-ဘက်လိုက်တော့ မိုက်ဘက်ပါ’ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံ မရှိတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ အယူအဆမျိုးတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို လျှော့ချ နှိမ့်တွက် ခံထားရတာတွေ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပညာရေးမှာ မိန်းကလေးမို့ စာတတ်စရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆ မျိုးတွေတောင် ရှိခဲ့တာပါ။ အမျိုးသမီးဆိုတာ လင်ကောင်းသားကောင်း ရရမယ်၊ အိမ်မှုကိစ္စ နိုင်နင်းရင်လုံလောက်ပြီ ဆိုတာတွေကိုသာ ရည်ရွယ်ချက်တွေလို စွဲလန်းခဲ့ကြ တာပါ။
ဒါပေမဲ့ ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကတော့ ကိုလိုနီခေတ်မှာကတည်းက ပညာရေး၊ လူမှုရေးကနေ စလို့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအထိ ရှေ့ထွက်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြရာက အမျိုးသမီး တွေရဲ့ အစွမ်းကို ပတ်ဝန်းကျင်က အတော်အတန် လက်သင့်ခံလာကြရပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အပြည့်အ၀တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင် ကိုင်ဆွဲမိနေတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံလောင်းရိပ်တွေတော့ ရှိနေတုန်းပါ။ စနစ်တကျ ပြုစုရေးရင် အခိုင်အလုံ ရေးစရာတွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလောင်းရိပ်တွေထဲက လွတ်အောင် ရုန်းထွက် ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရုန်းထွက်နိုင်လောက်တဲ့ခွန်အားမျိုး၊ အစွမ်းသတ္တိမျိုးတွေ၊ ပိုင်နိုင် ခိုင်မာတဲ့ အရည်အသွေးတွေ အရည်အချင်းတွေ ရှိဖို့လိုတာလည်း အမှန်ပါပဲ။
ခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လတ်တလောဖြစ်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးထဲမှာ ဦးဆောင် ပါဝင်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးပါပဲ။ နောက် မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ မစုစုနွေး၊ မမီးမီး၊ မနီလာသိန်း၊ မဖြူုဖြူသင်းတို့ အပါအ၀င် အမျိုးသမီးတွေဟာ တကယ် အလုပ်လုပ်ရင်း အသိအမှတ်ပြုခံလာရတာ၊ နေရာရလာနိုင်ကြတာ၊ နေရာယူပြီး အရည်အချင်း ပြလာနိုင်တာတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နိုင်ငံ့အရေးထဲက ထင်ရှားတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ပြယုဂ်ပါပဲ။
တချိန်တည်းမှာပဲ အမျိုးသားတွေရဲ့ အနှိပ်စက်နဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုကို ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါကလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နားလည်အောင် ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်းဖို့က လွဲလို့ တခြားအဖြေ ကျမတော့ ရှာမတွေ့သေးပါ။ ညှိလို့မှ မရရင်…. ဆိုတော့လည်း… အဲဒီအဖြေကို ရှာရမယ့်သူတွေဟာ ကာယကံ ရှင်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးတွေ၊ ဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့ ခံနိုင်ရည်အပေါ်မှာ တည်ပြီး အဖြေ ထုတ်ရမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရည်အသွေးတွေ မြင့်မားဖို့၊ မြင့်မားခွင့်ရဖို့ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်တိုင်က ကြိုးစားယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ဘက် အမျိုးသားများဘက်ကလည်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို အသိအမှတ်ပြု လေးစား တန်ဖိုးထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို အပြန်အလှန် လေးစားမှုရှိမှပဲ သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းတွေကို အပြန်အလှန် တွဲဖက် အသုံးချခွင့်ရပြီး အခွင့်အရေးတွေ ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးဆိုတာဟာ လူ့ဘောင်လောကကို သာယာပြည့်စုံအောင် အတူ ယှဉ်တွဲဖန်တီးရမယ့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ယူရမယ့် ပြိုင်ဖက်တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒါကို အမျိုးသားတွေ က ကောင်းကောင်း အသိအမှတ် ပြုတတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကလည်း ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ယုံကြည်ပြီး ဦးဆောင် ဆုံးဖြတ်ရမယ့် နေရာတွေ ယူတတ်ဖို့၊ ယူရဲဖို့၊ ယူနိုင်အောင် ဖန်တီးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှပဲ အမျိုးသမီးအချင်းချင်းအတွက် အရေးကိစ္စတွေကို သေသေချာချာ ပါဝင်ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ဦးတည်ချက်အားလုံးဟာ အမျိုးသားအမျိုးသမီး တန်းတူ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ ကိုယ့်လောက၀န်းကျင်ကို အလှဆင်ဖို့ပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ပြည်တွင်းက ဆရာမကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်က ဘီဘီစီရေဒီယိုမှာ ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးကို လက်ဆင့်ကမ်းချင်ပါတယ်။
“အမျိုးသမီးတွေက အရည်အချင်းရှိပြီးသားပါ။ လမ်းတွေဖွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်”
ဒီကနေ့ (၂၉၊၁၁၊၀၇) မှာ အသက် ၉၂နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အထိ၊ ဘ၀တလျှောက်လုံး နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါ်.. စာအုပ်စာပေအပေါ်.. တဆံခြည်စာမျှ သစ္စာမယွင်းဖူးခဲ့တဲ့၊ အမှန်တရားအတွက် အလွန် တာဝန်ကျေခဲ့တဲ့၊ စိတ်ဓါတ်ခိုင်ကျည်လှတဲ့၊ မေတ္တာ ကရုဏာရှင် သတင်းစာဆရာ စာရေးဆရာမကြီး အမေ လူထုဒေါ်အမာ.. အသက်ရာကျော် ရှည်တဲ့အထိ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စာတွေအများကြီး ရေးနေနိုင်ပါစေ..။ အမေမာဟာ… ဆရာဂျမ်း(ကဗျာဆရာတင်မိုး)ရဲ့ "အမေသို့" ဆိုတဲ့ ကဗျာထဲကလို
စာအုပ်ပို့ဖို့ ကိစ္စခက်ခဲတာက တကြောင်း၊ PDF နဲ့ တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုတဲ့ သူတွေ များတာကြောင့် တကြောင်း၊ နောက်ဆုံးတော့ အသင်းရန်ပုံငွေက အရေးမကြီး၊ များများဖတ်ရဖို့က ပိုအရေးကြီးတာမို့ အများစုရဲ့ တောင်းဆိုမှုအတိုင်း PDF နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
at November 22, 2007 8 comments:
ဂျစ်တူးလေးက Tag ထားတာ ကြာပါပြီ။ ကျမကလည်း ရေးချင်တာကြာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီရက်တွေ ထဲမှာ အလုပ်တွေက တကယ်ကြီးကို ပိ။ ပြီးတော့ ဘယ်လောက်များလဲဆို ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပြီးတာတောင် ကင်မရာထဲကနေ မထုတ်ဖြစ်။ ထုတ်ပြီးပြန်တော့လည်း ဂျစ်လုပ်သလို ဓါတ်ပုံမှာ နံပါတ်လေးတွေ မတပ်တတ်... :D
ခုတော့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး Tag တဲ့ သူကိုပဲ ပြန်အပ်လိုက်ရ.. ဂျစ်လိုမျိုးလေး လုပ်ပေးပါပေါ့။ :P
ကဲ.. ကျမသွားလေရာ ပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေ….အဲဒီမှာ။
ကျမရဲ့ လွယ်အိတ်ကလေးပါ။(သေးသေးလေးနဲ့ တော်တော်ဆံ့)
အိတ်ဆောင် ဒိုင်ယာရီလေး (RFA က ပေးထားတာ)
Electronic Dictionary (အင်္ဂလိပ်စာညံ့လို့ ဆောင်ရ)
ရှူဆေးဗူးလေး (အဖွားကြီးဆိုတော့ ခဏခဏ မူးတတ်လို့ J)
ဒါကတော့ စိတ်ညစ်စရာလည်းကောင်း.. အရေးကလည်းပါ….
အဲဒီ ဘီးလေး .. ဗမာပြည်ကတည်းက ပါလာတာ။(တကယ်တော့ အဖျားလေးကျိုးနေပြီ =)) )
ခုရိုက်နေတဲ့ ကင်မရာထည့်တဲ့ အိတ်ကလေးပါ။
မျက်မှန်အိတ်က ပိုပါသွားတာ .. (:P)
မျက်စေ့အလွန်ကျိန်းတတ်သော ကျမအတွက် အရေးပါသော မျက်မှန်ကလေး
ဓါတ်ပုံထဲ မပါဘဲ ကျန်နေသေးတာက ရွက်ဆုတ် စာအုပ်လေး။(ဘယ်လို ကျန်ခဲ့တယ် မသိ)
(၇၊ ၁၁၊ ၂၀၀ရ)
စက်တင်ဘာမှာ သေသွားခဲ့တဲ့ ကျမရဲ့ စာရေးချင်စိတ်တွေ ခုထိ ပြန်မရှင်နိုင်သေး။ အဲဒီတုန်းက 'ကျနော်လည်း ကဗျာရေး မရဘူး..အမကြီးရာ..' ဆိုတဲ့ ကျမမောင်လေး သစ်ကောင်းအိမ်က ခုကျတော့ဖြင့် ကဗျာတွေ တပုဒ်ပြီး တပုဒ် ရေးချင်နေတာပဲတဲ့။ ကောင်းလိုက်တာ.. ကျမ ဘလော့ကလေး အိပ်ပျော်မနေတော့ဘူးပေါ့၊ သစ်ကောင်းအိမ်ဟာ ကျမသိပ်ကြိုက်တဲ့ ကဗျာဆရာတွေထဲမှာ တယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူ့ကဗျာတွေ ကျမဘလော့မှာ တင်ရတာ ကိုယ်တိုင် စာရေးဖြစ်ရသလို စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။
ဆောင်းဦးပေါက်ကွင်းပြင်မှာ ရွှေဝါရောင်စပါးတွေ ၀င်းမှည့်နေပြီ ညီမလေး
ငါတို့ ၀ပ်တွားတဲ့ ၀တ္တကမြေကို
ဒါ ... အကြမ်းဖက်မှုလား
ရန်သူကို ရန်သူလို့ မခေါ်နဲ့ဆို
ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ကာတွန်းထဲက လူရိုင်းတွေလို
“ ယူသန် .. ယူသန် .. “ လို့
၀င်းမှည့်နေပြီ ညီမလေး ။
( ၄ – ၁၁ – ၂၀၀၇ )